Incwadi yeLonavala Khandala yoKhenketho | Shayela ku: + 91-993.702.7574
I-Lonavala isitrato esinegama elibizwa ngokuba yi-jewel ye-Sahyadri Mountains kufuphi ne-Mumbai e-Maharashtra. I-Lonavala Khandala Tour Package ikunika ithuba lokuva into enhle kwaye enhle, ethwele isikhwama esigcwele imemori. Ubuninzi bemvelo kwimeko yemifula yamanzi, iindawo ezinjengamahlathi kunye nemigodi, iindawo ezinqabileyo, amachibi kunye nemingxuma yamandulo yenza iLonavala mini iparadesi kunye neendawo ezikuphela kwendawo yokuhlala kwindawo ehlala kuyo. Olu hambo luya kuthatha kwiindawo ezinemibala eluhlaza eluhlaza, iimbono kunye neentonga ezifihlakeleyo kuyo yonke indawo. ULonavala uhlala ebomini ngexesha lonyaka njengoko iindawo ezisemaphandleni ziya kuba luhlaza oluhlaza kunye namanzi kunye namachibi. I-Lonavala Khandala Tour Package yenzelwe ukuba abantu bajonge ukuchitha ixesha elithile kwiindawo ezithandekayo zentshona ye-ghats. Iighats neentlambo zeLonavala kunye neKhandala zihle kakhulu kwaye zenzeke ngendlela enokumangalisayo. I-Lonavala Khandala Tour Package inikeza indawo yokuphumla epheleleyo kwindawo ephumayo apho umntu unokufumana ixesha elifanelekileyo lobomi babo. Izikhululo zeenduli zaseKhandala zibone ukunyuka nokuwa kwezikumkani ezininzi ezifana neMaratha, iPerhwas kunye namandla angamaKoloni kumazwe aseYurophu. I-Sand Pebbles Tour N Travel ihambisa i-10% isaphulelo ngeli xesha loSuku lwe-Independence. Sinika i-Packaging Tour yeLonavala Khandala enomdla okufanelekileyo kwizibini, abahlobo okanye intsapho.
Ngokutyelela kwethu, unokufumana uhambo lweeholide lobomi bakho owake waphupha ngalo. Siyaqinisekisa ukuba uya kuba nolwazi oluhle kakhulu lweeholide kunye neenkumbulo zobomi bonke.
Ikhowudi yoKhenketho: 245
USUKU 01: MUMBAI -LONAVALA
USUKU 02: LONAVALA
USUKU 04: LONAVALA- MUMBAI (ISIHLOKO)